တိုက်ပြန်ပြီ .. သေပြန်ပြီ (8-12-11) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » တိုက်ပြန်ပြီ .. သေပြန်ပြီ (8-12-11)
တိုက်ပြန်ပြီ .. သေပြန်ပြီ (8-12-11)
Posted by etone on Dec 8, 2011 in News | 13 comments
ကဲ … တိုက်ပြန်ပြီတဲ့ … ။ တိုက်လိုက်တိုင်း အသေကြေချည်းပဲမို့ … တစ်ခုခုတော့မှားနေပါပြီ ။ ဒီရက်ပိုင်း ကြားရတဲ့ ကားတိုက်မှုသတင်းတွေမှာ ထိခိုက်ကွဲပြဲဒဏ်ရာတင်မကပဲ ၊ လူသေတဲ့ အထိဖြစ်နေကြလို့ ကားမောင်းသူတိုင်းသာမက ၊ ကားစီးသူတွေရော ၊ ကားလမ်းဖြတ်ကူးသူတွေပါ သတိနဲ့ယှဉ် ဆင်ခြင်သင့်ပါတယ် …. ။
ယခုလည်း ကားတိုက်မှုသတင်းတစ်ခု ရထားပါတယ် …. ။ ရန်ကုန်တိုင်း ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် ၊ ကမ်းနားလမ်းမပေါ်က ထီးတန်းအိမ်ယာရှေ့မှာ ယနေ့ ညနေ သုံးနာရီခန့်ကဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ … … ။ အဲ့ဒီနားမှာ ဦးပိုင်လီမီတက်က ကားတွေ အဝင်ထွက်ရှုပ်ယှက်ခတ်နေပြီး … ဝန်းထဲက ထွက်လာတဲ့ ဆီကားတစ်စီးနဲ့ … နဲ့ သီရိမင်္ဂလာဈေးဟောင်းဘက်ကို သွားနေတဲ့ ကုန်စိမ်းတင် ဒိုင်နာကားတို့ တိုက်မိမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ် ။ ကားမတော်တဆမှုကြောင့် ဒိုင်နားကားခေါင်းမှာ ပုံပျက်ကာ ပိန်ချုံသွားခဲ့ပါတယ် ။ ပွဲခြင်းပြီး သေဆုံးသည်ဟု ယူဆရသည့် အမျိုးသားတစ်ဦးလည်း ယခုထက်တိုင် ပုံပျက်နေသောကားခေါင်းထဲတွင်ရှိသေးကြောင်း သိရပါတယ် ။
ကြားရတဲ့ သတင်းကတော့ စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ ။ မီဒီယာလုပ်ငန်းတွေ တွင်ကျယ်လာတာနဲ့အမျှ တစ်ခုခုဆို သတင်းပြန့်လွယ်တဲ့ ဒီခေတ်မှာ ကြားရတဲ့ ကားတိုက်မှုသတင်းတွေထဲ ၊ လူပါသေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းချည်း ကပ်ကပ်ပါလာတာတောင် ၊ ထပ်ခါ ထပ်ခါ အလားတူ အဖြစ်မျိုး ဖြစ်နေကြတာ ဘာကြောင့်များပါလိမ့်လို့တွေးမိပါတယ် ။ မဆင်မခြင် စည်းကမ်းမဲ့ ကားမောင်းခြင်း ၊ ပြိုင်မောင်းခြင်း ၊ သတ်မှတ်မိုင်နှုန်းထက်ပိုမောင်းခြင်း ၊ လမ်းပြောင်းပြန်မောင်းနှင်ခြင်းတွေအပါဝင် ၊ သတိလက်လွတ်ကားလမ်းဖြတ်ကူးခြင်းတွေကြောင့်လည်း မတော်တဆမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်နေတုန်းပါပဲ … ။ ယာဉ်တွေ စည်းကမ်းရှိဖို့ ယဉ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးမှာ တာဝန်ရှိပေမယ့် …. သူတို့ out of control ဖြစ်နေတဲ့ … မျက်ကွယ်နေရာတွေမှာ မမြင်လျှင် မမြင်သလို မောင်းနှင်နေကြတုန်းပါပဲ ။ မတော်တဆမှုရဲ့ နောက်ကွယ်တိုင်းမှာ ကြေကွဲမှုတွေ ကပ်ပါလာတာ သိလျှက်နဲ့ မဆင်ခြင်ကြတာ ပုစွန်ဦးနှောက်နဲ့ အသက်ရှင်နေကြသူများလားလို့တောင် တွေးမိပါသေးတယ် ။
အန္တရာယ်ကို ပေါ့ပေါ့ တန်တန်သဘောထားခြင်းကြောင့် မလိုလားအပ်တဲ့ ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်တဲ့အထဲ အသက်ဆုံးရှုံးမှုနဲ့ ကိုယ်လက်အင်္ဂါပဲ့ကြွေပျက်ဆီးမှုတို့က အကြီးကျယ်ဆုံးသော ဆုံးရှုံးမှုပါပဲ ။ ကားမတော်တဆမှုကြောင့် အသက်သေသွားခဲ့မယ်ဆိုလျှင်တော့ ကျန်ရစ်သူမိသားစု ၊ မှီခိုသူတွေအတွက် ဒုက္ခရောက်ရသလို … အသက်မသေသော်လည်း ကိုယ်လက်အင်္ဂါပဲ့ကြွေပျက်ဆီး ဒုက္ခိတဖြစ်သွားလျှင်တော့ … စိတ်ရော ကိုယ်ပါ ဒုက္ခဗရပွနဲ့ သေမယ့်ရက်ကိုစောင့်နေကြရမှာပါ … ။ ဒီကြားထဲ ဒေါသစိတ်နဲ့ ပြိုင်ဆိုင်မောင်းနှင်သူတွေကြောင့် လိုက်ပါစီးနင်းရတဲ့ ခရီးသည်ရော ကားလမ်းဖြတ်ကူးသူတွေပါ ကြားခံစတေးခံဖြစ်ရတာ ဖွံ ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ တိုးတက်မှု ပြယုဂ်တစ်ခုလားလို့တော့ … နားမလည်နိုင်တော့ပါဘူး … ။
ယာဉ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး အနေနဲ့လည်း စည်းကမ်းမဲ့ မောင်းနှင် ၊ ဖြတ်ကူး သူတွေကို တွေ့တဲ့ အခါ တိတိကျကျ အပြစ်ပေး ၊ ပညာပေးတွေ လုပ်သင့်ပါတယ် ။ ဒါမှလည်း မော်တော်ယဉ် မတော်တဆ ထိခိုက်မှုနှုန်းကျဆင်းပြီး အလဟသ အသက်စတေး ၊ ဒုကိ္ခတဖြစ်ခံရတဲ့ အဖြစ်ပျက်တွေ လျော့နည်းသွားမှာပါ ။ မောင်းချင်သလို မောင်းနေတဲ့ လိုင်းကားတွေပေါ်က ပစ်ချပေးတဲ့ အကြွေလိုက်ကောက်နေတာမြင်မိတဲ့အခါမျိုးမှာ ….. စိတ်မကောင်းတောင်ဖြစ်မိပါသေးတယ် … ။ ဒီလိုပုံနဲ့ နောင်ဘယ်နှစ်နှစ် ၊ …. ဘယ်တော့များမှ ယာဉ်စည်းကမ်း ၊ လမ်းစည်းကမ်းတွေ လိုက်နာ တိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံဖြစ်လာမှာလဲ … ။
ရေးလက်စနဲ့ … နောက်တစ်ခု ထပ်ပွားချင်ပါသေးတယ် … ပို့ကုန် သွင်းကုန်လုပ်ငန်းတွေ ကောင်းကောင်းလည်ပတ်နိုင်တာ မင်္ဂလာပေမယ့် …. အဲ့ဒီ ပို့ကုန် သွင်းကုန် တွေ တင်ဆောင်တဲ့ ကုန်တင်ယာဉ်ခေါ် ကွန်တင်နာကားသမားတွေ ရမ်းကားစွာ မောင်းနှင်နေတာ … မြင်ရသူတောင် ရင်တမမနဲ့ အသက်ရှုမဝသလိုပါပဲ … ။ အထူးသဖြင့် ညဘက်လို အချိန်မျိုးမှာ တင်ဆောင်ထားတဲ့ ကိုယ့်ဝန်ထုတ်ကို သတိမရပဲ အပြိုင်မောင်းနှင်နေတာမျိုးတွေ မရှိသင့်ပါဘ ူး.. ။ မူးလျှင် မမောင်းနဲ့ မောင်းလျှင် မမူးနဲ့ ဆိုတဲ့စကားက ရယ်စရာလိုတောင် ဖြစ်နေပါတော့တယ် … ။
ယဉ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး ဆရာတို့ရေ … ကိုယ်ချင်းစာစိတ်လေးနဲ့ … တင်းတင်းကြပ်ကြပ်စီစစ် ဆောင်ရွက်သင့်ပါပြီ … ။ တကယ်စိတ်ရင်းမှန်နဲ့ တောင်းဆိုပါတယ် … ကိုယ်တိုင် အရပ်ဝတ်နဲ့ ရှောင်တခင်လိုင်းကားတိုးစီးကြည့်ကြပါဦး ၊ လမ်းမထွက် လမ်းလျှောက်ကြည့်ကြပါဦးလို့ ….. ။ သေသေချာချာ စည်းမျဉ်းတွေထုတ်ပြီး ရမ်းကားစွာ မောင်းနှင်သူတွေကို အရေးယူသင့်ပါပြီ …. ဒါမှလည်း အလကားသက်သက် လမ်းမပေါ်မှာ အသက်ထွက်ရတဲ့ ကိစ္စတွေ လျှော့နည်းသွားမှာပါ ။
ဓါတ်ပုံကတော့ … နောက်နေ့တော့တင်မှာပေါ့
စိတ်ညစ်စရာပါပဲ။ နေ့တိုင်းဒီလိုသတင်းမျိုးမကြားရတဲ့နေ့မရှိသလောက်ပါပဲ။ လူတွေကလဲလူတွေ။ ကားတွေကလဲကားတွေ။ ဘယ်သူ့ကိုအပြစ်တင်ရမှန်းတောင်မသိဘူး။ အပြင်ထွက်ရင်ကိုယ့်အသက် ကလေးပဲကိုယ်ကြံဖန်မွေးပြီးသတိနဲ့သွားနေရတယ်။
7.12.2011 နေကလဲမြေနီကုန်း 119 store ရှေမှာကာတိုက်တယ်လို့ကြားပါတယ် တိုက်တဲ့တားသမားက ကားမောင်ထွက်ပြေးစဉ် နောက်ကား 1စီးမှထပ်လိုက်ကာ ကားနံပါတ်ယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်
ဓါတ်ပုံကြည့်ပြီးမှဘဲ သင်္ခ ါရ အဖြစ် တရားမှတ်တော့မယ် မတုံ ရေ
အင်း Etone မ တစ်ယောက်လည်း သတင်းတွေဘက်
ဓါတ်ကျနေပုံရတယ်။ စာလေးဘာလေးလည်း ပြန်ရေးပါဦးဗျို့။
လိုင်းကားအင်မတန်စီးတဲ့ ကိုရင်လည်း ဘယ်တော့
ဒေါ်အိတုံရဲ့ တိုက်ပြန်ပီ သေပြန်ပြီးထဲ ပါလာဦးမလဲ မသိဘူး…။
အစိမ်းသေပေမယ့် ချောမွေ့နေဆဲ ဖြစ်တဲ့ ကိုရင့်စည်မျက်နှာလေးလည်း
တုံတုံ ရိုက်ပြီး ဂေဇက်မှာ တင်ပေးရမယ်နော့… ကွိကွိ
ပီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်က ၄၃ဘတ်စ်ကားကြီး ကားတွေကျပ်တော့ လမ်းပြောင်းပြန်မောင်းပီး ကျော်တက်တာ တစ်ဘက်လမ်းမှာကူးဖို့ရပ်နေတဲ့ အဘွားကြီးနဲ့ ကလေးတစ်ယောက် ကြိတ်သွားလိုက်တာ မြင်တောင်မကောင်းဘူးဆိုပဲ စွယ်တော်လာဖူးတာတဲ့
သဂျီးမင်း ခံခိုင်းနေဘီ ခံခိုင်းနေဘီ အသက်အာမခံလေ…..
ခံစရာရှိတာ ခံလိုက်ကြဒေါ့ ………
ကျွန်တော်တို့လည်း အရင်ကဆို ….လိုင်းစားစီးရင်
ကားဖိုက်မှ သဘော ကျခဲ့တာ….
ဓါတ်ပုံလေးပါ တင်ပေးလိုက်ပြီ … ဒီအတိုင်းဆို အတော်ဆိုးတာပဲနော်